Mareynkanka oo madaxweyne Farmaajo ku cadaadinaya inuu ka hadho Kiiska Dacwada Badda Soomaalia. – Xeernews24
Mareynkanka oo madaxweyne Farmaajo ku cadaadinaya inuu ka hadho Kiiska Dacwada Badda Soomaalia.
22. Oktober 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya dalka Kenya, ayaa sheegay in uu ka dalbaday madaxweynaha Soomaaliya in dacwadda badda lagu xaliyo meel ka baxsan maxkmadda caalamiga ah ee ICJ.
“Arrinta waa in si dhaqsa ah wax looga qabtaa, waxaan kala shaqeynay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmajo iyo Uhuru Kenyatta, sidii ay miiska wadhadalka u yimaadaan, aniguna waxaan tegay Magaalada Muqdisho, si aan Madaxweyne Farmajo uga la hadlo arrintan, waxaana ku idhi isaga bax kiiska maxkamadda ,” ayuu yidhi safiirka Mareykanka u fadhiya Kenya.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/badda.jpg 250 540 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-10-22 12:22:392019-10-22 12:22:39Mareynkanka oo madaxweyne Farmaajo ku cadaadinaya inuu ka hadho Kiiska Dacwada Badda Soomaalia.
Baaq Ku Wajahan Xukuumada DDS. Raisul Wasaare Dr, Abiy Ahmed oo ka digay dagaal dhexmara dowladaha Masar iyo...